ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဆင့်အတန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဆင့်အတန်း (အင်္ဂလိပ်: Conservation Status) ဆိုသည်မှာ ဇီဝသက်ရှိများ အစုအဖွဲ့တစ်ခု (ဥပမာ- မျိုးစိတ်တစ်ခု) ၏ ဆက်လက်၍ တည်ရှိနေနိုင်မည့် အလားလာနှင့် မကြာမီ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်မည့် အလားအလာ စသည့်တို့ကို ညွှန်ပြပေးသော ဖော်ပြမှု သတ်မှတ်ချက်ပင် ဖြစ်သည်။ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဆင့်အတန်းအား အကဲဖြတ်ရာတွင် အချက်ပေါင်းများစွာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ တစ်ဦးချင်း၊ အစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်း ကျန်ရှိနေသည့် အရေအတွက်အား စာရင်းကောက်ယူရုံတင်မကဘဲ အချိန်နှင့်အမျှ တိုးလာနိုင်မည့် အရေအတွက်၊ ကျဆင်းသွားမည့် အရေအတွက်၊ အောင်မြင်နိုင်မည့် ပေါက်ဖွားနှုန်းနှင့် လက်ရှိတွင် ၎င်းအပေါ်သို့ မည်သည့်အခက်အခဲနှင့် အန္တရာယ်များကျရောက်နေသည် (သို့) ခြိမ်းခြောက်နေသည်ကို သိရှိနားလည်ခြင်း စသည့် အချက်အလက်ပေါင်းများစွာကို ထည့်သွင်းသုံးသပ်ရ၏။ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း စနစ်အမျိုးမျိုးရှိကြပြီး၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့် ၊ အမျိုးသား အဆင့်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်များတွင်သာမက စားသုံးသူများအတွက်ပါ ၎င်းစနစ်များ အသုံးပြုလျက် ရှိကြသည်။
၁ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသောမျိုးစိတ်များဆိုင်ရာ IUCN အနီရောင်စာရင်း
၂ သတ်မှတ်မှု အဆင့်အတန်းများ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
၂.၁ မျိုးသုဉ်းမှု အဆင့်
၂.၂ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရမှု (သို့) အန္တရာယ်မြင့်မားမှု အဆင့်
၂.၃ အန္တရာယ်နည်းပါးမှု အဆင့်
၂.၄ အခြားသောသတ်မှတ်မှု အဆင့်
ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသောမျိုးစိတ်များဆိုင်ရာ IUCN အနီရောင်စာရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
IUCN မှ ထုတ်ပြန်သည့် အန္တရာယ်ကျရောက်နေသောမျိုးစိတ်များ အနီရောင်စာရင်း သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် လူသိအများဆုံးသော ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအခြေအနေများ စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စနစ်ဖြစ်သည်။ IUCN အနီရောင်စာရင်းတွင် မျိုးစိတ်များ၏ အရေအတွက်ကျဆင်းမှုနှုန်း၊ ဦးရေပမာဏ၊ ပထဝီမြေပြင်ဖြန့်ကျက်တွေ့ရှိရသော ဧရိယာ၊ ဦးရေအလိုက် နေထိုင်ကျက်စားသော နယ်မြေအကွာအဝေး အကဲဖြတ်မှု စသည့်စံနှုန်းများဖြင့် အဆင့်အတန်းဖော်ပြ သတ်မှတ်ပေးထားသည်။
၎င်းစာရင်းတွင် ထိုကဲ့သို့သော ဖော်ပြမှုများသာမက လွန်လေပြီးသော ခရစ်နှစ် ၁၅၀၀ ကတည်းက မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ခဲ့သော မျိုးစိတ်များစာရင်းလည်းပါဝင်လေသည်။ IUCN အနီရောင်စာရင်းအပေါ် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ကြရာ တရားဝင်သုံးစွဲသည့် "ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသော" ဆိုသည့် စကားလုံးမှာ အောက်ပါအုပ်စု (၃) ခုကိုသာ အဓိကရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည် -
Critically Endangered(CR)။ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအန္တရာယ်ရှိသော မျိုးစိတ်။
Endangered(EN)။ မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသော မျိုးစိတ်။
Vulnerable (VU)။ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော မျိုးစိတ်။
သတ်မှတ်မှု အဆင့်အတန်းများ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
IUCN Conservation Status (version 3.1)
အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်အတန်းအမျိုးအစား (၇)ခုအား အုပ်စု (၃)ခုခွဲ၍သတ်မှတ်ထားသည် -
ခြိမ်းခြောက်ခံနေရမှု (သို့) အန္တရာယ်မြင့်မားမှု အဆင့်[ပြင်ဆင်ရန်]
(Critically Endangered)။ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအန္တရာယ်ရှိသော မျိုးစိတ်။
(Endangered)။ မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသော မျိုးစိတ်။
(Vulnerable)။ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော မျိုးစိတ်။
(Near Threatened)။ မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ကျရောက်လုနီးပါး မျိုးစိတ်။
(Least Concern)။ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းမရှိနိုင်သေးသော မျိုးစိတ်။
သစ်တောဦးစီးဌာနသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက် နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆/၉၄) ဖြင့် ပြဌာန်းထားသည့် "တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ်မြေများထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ" အခန်း(၅)၏ "ပုဒ်မ-၁၅ (က)" အရဖြင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ၎င်းရက်စွဲပါ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၈၃/၉၄) ဖြင့် မျိုးသုဉ်းမည့်အန္တရာယ်မှ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး အဆင့်အတန်းများအား အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာပြဌာန်းထားသည်ကိုတွေ့ရသည် -
အလုံးစုံအဆင့်။ လုံးဝကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ( အန္တရာယ်မြင့်မားမှု အဆင့် )
သာမာန်အဆင့်။ သာမာန်ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ( အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု အဆင့် )
ကာလအပိုင်းအခြားအဆင့်။ ရာသီအလိုက်ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ( ကာလအပိုင်းအခြား၌ အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု အဆင့် )
↑ Categories and Criteria The IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved 19 October 2021.
↑ IUCN. (2012) IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1 Archived 2016-01-28 at the Wayback Machine. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ISBN 9782831714356.
↑ ၄.၀ ၄.၁ CITES (ဇွန်လ ၂၀၁၂). "တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှုအဆင့်အတန်းများ" (in မြန်မာဘာသာ) (PDF). CITES ကွန်ဗင်းရှင်း နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်များ လက်စွဲစာစောင် (၂/ ၂၀၁၂): စာ(၇~၁၀). သစ်တောဦးစီးဌာန.
Search the IUCN Red List။
IUCN Red List Categories and Criteria Version 3.1။
Wildlife Conservation - Initiatives - WWF။
သစ်တောဦးစီးဌာန၏ "CITES ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်များ" လက်စွဲစာစောင်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ IUCN Red List စာရင်းဝင် အပင်မျိုးစိတ်များ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး_အဆင့်အတန်း&oldid=718316" မှ ရယူရန်